windows7home premium DVD ( iso ) ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
windows7home premium DVD ( iso )
ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်..32 Bits အတွက်ရော 64 Bits အတွက်ရောတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်..။32 Bits
အတွက် 12 ပိုင်းနဲ့ 64 Bits အတွက် 15 ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်.။
up4vn.com နဲ့ mirrorcreator.com နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Upload ဆိုဒ်တွေချည်းပါပဲ.။
Download Links ! (32bit)
Download Links ! (64bit)